Ambongadiny malefaka fitoviana PVC ho an'ny mpanamboatra tsindrona kiraro an'ny biby fiompy | INPVC
Loko: Mangarahara, maro loko
Dingana: Tsindrona tsindrona
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana tsindrona kiraro biby. Ny akanjon'ireo biby fiompy PVC dia misy granules manana fanoherana mekanika avo lenta, fahombiazan'ny fikirakirana, fanavaozana ary fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy.
hakitroky 1.18-1.22 / cm3
Loko Mangarahara, voajanahary, mena, maintso, mavo, maintso, manga na namboarina
Fampiharana Kiraro Insole, Kiraro Iray, Sakan'orana, Gumboots, Tady Tsivalana, kapa,
Kiraro misy volo, kiraro biby fiompy, kiraro afrikanina, kiraro mahazatra, kiraro fanatanjahan-tena
Endri-javatra fototra Sariaka amin'ny tontolo iainana. Tsy misy fofona. Tsy misy poizina
Mateza . Manaova fanoherana. tsy-taratasy kely
Fitaovana fanorenan-tany tena tsara
Toetra novaina Fanoherana UV
Alikaola manohitra solika / asidra / tavy / ra / etil
Miondrika fanoherana. Manohitra ny abrasion. Mahazaka sterilization
OEM / ODM MANAIKY
Fonosana 25kg / Kitapo Kraft
Loading Quantity 20.000kgs-25,000kgs / 20'C;
Ny fitambaran-kiraro kiraro PVC dia be mpampiasa amin'ny tsindrona kiraro biby. Granules PVC malefaka sy malefaka miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, tsy misy fofona, fanoherana tsara aforitra ampiharina amin'ny outsoles. Ny plastika PVC mangarahara sy vita amin'ny kristaly dia azo namboarina ho fotsy, volontany, mavo sy ny sisa.
INPVC dia matihanina amin'ny fitambarana PVC ho an'ny fampiharana ankapobeny toy ny tsindrona, fitrandrahana ary famonoana. Miaraka amin'ny traikefa feno amin'ny famokarana PVC, manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny filàna azo antoka amin'ny kalitao sy serivisy izahay.
Teo aloha: PVC Granules dia mitambatra tsindrona tsindrona ho an'ny kiraro
Manaraka: PVC Granules mangarahara ho an'ny Ankizy Kiddy Jelly Kiraro